Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka H36 Shiinaha isku dhafan oo leh aaladaha wax soo saaraha iyo alaab-noolaha | Lu Young
H36 Shiinaha mashiinka birta ah ee birta ah oo isku dhafan mashiinka qashin qubka iyo aaladda nool
Mashiinka lathe-ka ee H36 ee qashin-qubka ayaa dhameystiri kara howsha leexashada ee dhululubada, kooniska, fallaadhihii tallaabada loo qaaday, wajiyada dhamaadka, godadka caajiska ah, jeexitaanka, dunta, iyo meelaha dusha sare leh. Sariirta gogosha leh waxay leedahay taako tareen oo ballaaran iyo qalafsanaan wanaagsan. Garaaca 'X-direction stroke' waa mid weyn, oo ku habboon rakibidda iyo adeegsiga noocyo kala duwan oo waxqabadyo ah. Wareegidda, shiididda, qoditaanka iyo tubbada ayaa lagu xidhi karaa hal mar, oo leh saxnaan sare iyo hufnaan sare. Mashiinka shaqadu wuxuu leeyahay meelayn sare iyo tusmeyn sax ah, si otomaatig ah ayuu u jebin karaa, tayada waxsoosaarkuna waa mid deggan oo lagu kalsoonaan karo.
Khadka Tooska ah ee Mashiinka CNC Lathe H360
ugu badnaan lulid is dul saaran
Chuck / kollet
Calool xanuun kollet
X axsaabta ugu badan ee safarka
Z dhidibka ugu badan safarka
Jidka toosan ee xawaaraha sare
Ku dhex mari dunmiiqa
Xawaaraha quudinta degdegga ah
X: 20 Z: 20 m / daqiiqo
haysta qalabka baandada
X / Z min cutubka
Xaqiijinta X / Z
GSK928 CNC maamusha
SIEMENS, FANUC, KND iwm
Taiwan HIWIN Xawaaraha Sare ee Hagaha Tooska ah
4 qalabka saldhigga haysta
Danab: 380v 3 wajiga (haddii deegaankaaga leeyahay codsi gaar ah fadlan nala soo socodsii)
1. Sariirta isku dhafan: Sariirta isku dhafan waxay qaadataa qaab dhismeed qaab dhismeed oo isku dhafan, kuwaas oo lagu daweeyay gabow si ay u bixiso adkeyn adag iyo xasilooni wanaagsan
2. Qaabka quudinta dhaadheer: Habka quudinta dhaadheer waxaa lagu rakibaa sanduuqa madaxa sariirta hoostiisa wuxuuna qaataa foomka isku xirka tooska ah. Iyada oo loo marayo kursiga lowska ee ku dul yaal saxanka slide, saxanka slide wuxuu ogaan karaa dhaqdhaqaaqa muddada dheer. Sii-adkeynta usha furka waxaa lagu gaaraa adoo adkeeya lowska si loo hagaajiyo kacsanaanta iyo adkaanta riixitaanka usha fur. Usha kubbadda iyo lowsku waxay qaateen eber nadiifin ah.
3. Habka quudinta horizontal: Habka jiifka jiifka ayaa sidoo kale qaata foomka isku xirka tooska ah, worktable-ka waxaa wata kursiga lowska si loo ogaado dhaq dhaqaaqa dambe. Habka quudinta jiifka ahi wuxuu qaataa bucshiradda isku dheelitirnaanta go'an ee ku dhejisan barta shaqada ee hagaajinta, taas oo ku habboon oo lagu kalsoonaan karo in la isku hagaajiyo, waxayna si weyn u hagaajineysaa waxtarka hagaajinta habka quudinta jiifka ah.
4. Labada faasas waxay qaataan hageyaal duuban oo toosan, wadista iyagoon bannaan lahayn, qallafsanaan wanaagsan iyo saxnaan sare; waxaa jira noocyo badan oo haysta qalab go'an oo qalabaysan oo lagu diyaarshay saxanka jiifka ah ee dhaadheer, kaas oo xaqiijin kara hanaan badan oo hal mar lagu shaqeynayo oo leh saxnaan sare.
Mashiinka ugu weyn waxaa wada mishiinka 'AC servo motor', kaas oo garan kara isbeddelka xawaaraha stepless iyo goynta xawaaraha toosan ee toosan iyo goynta xawaaraha sare; qalabka isku haysa ayaa sidoo kale lagu rakibi karaa chucks gacmo, chucks awood pneumatic, chucks Haydarooliga, iwm sida ay shuruudaha user. Qaybta shaqadu waa ku habboon tahay shaqaduna waa lagu kalsoon yahay.
Ku habboon in la dhoofiyo baakadaha badda si loo hubiyo in badeecadaha ay yihiin kuwo adag oo aamin ah oo qoyaan-la'aan ah.
1. Baakadaha aan-foojignaanta ahayn, waxaan u isticmaalnaa plywood-ka badda. Waxaa lagu buuxiyaa kiisaska alwaaxda ah iyada oo aan la fiiqin plywood si loo dhoofiyo
2. Birta saxan birta ah, waxay ka xoog badan tahay 3-5 jeer saxanka saldhigga plywood caadiga ah.
3. Biyo-aan-caddeyn iyo caddayn qoyan, filim u adkaysta biyaha ayaa mashiinka oo dhan ku duubay.
4. Kiis buuxa oo shiidan ah, kahortagga shilalka oo alaabtu haay ahaato mid hagaagsan.
Hore: C6160 mashiinka lathe gacmeedka guud ee saxda ah